Taliyaha AMISOM oo xilka wareejinaya – Radio Daljir
Taliyaha AMISOM oo xilka wareejinaya
Janaayo 29, 2018 5:52 b 0
Taliyaha ciidamada Midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya ee AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle ayaa sheegay inuu xilka wareejinayo dhowaan, kadib markii ay dhamaamatay waqtigiisa xil haynta.
Gen. Subagle oo xilka kala wareegay bishii Julay ee sanadkii 2016 Jonathan Rono oo u dhashay dalka Kenya ayaa sheegay inuu ka xunyahay inuu xilka wareejiyo isagoo aan soo afjarin kooxda Al-shabaab ee Soomaaliya joogta.
Jenanka ayaa u rajeeyay saraakiisha kalle ee lasoo magacaabi doono inay guullo ka gaaraan la dagaalanka Al-Shabaab.
AMISOM oo Soomaaliya timid sanadkii 2007dii ayaa waxaa ay maamulaan xarumaha madaxtooyada, garoonka iyo dekedda Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka, ciidamadan ayaa sidoo kalle waxaa qayb ka ah ciidamada dowladaha dariska la’ ah Soomaaliya ee Itoobiya, Jabuuti iyo Kenya oo xiligii dowladdii Cabdulaahi Yuusuf aad looga horyimid Muqdisho inay dalka soo galaan.
Saaka & Dunida iyo Cabdifatax Cumar Geeddi (dhegayso)